Xaajo.com – Xaajo.com: The latest Ogaden / Somaligalbeed News on the Net.. » Jigjigaa riyo lagu qabsaday yay ka gadantaa? By Maxamed Gadhweyne
Jigjigaa riyo lagu qabsaday yay ka gadantaa? By Maxamed Gadhweyne
December 10, 2011 - Written by xaajo1 - Edited byxaajo
Sida lala wada socdo saxaafada kooxda Asmara waxaa caado u noqotay inay tabiso warar iyaga mooyee cid kale oo maqashayi jirin, isla markaana kusoo cel celceliyaan film kun jeer ka badan la daawaday oo lagu caajisay (Meel heblaan weeraray, intaasaana ku dillay) Hadaba maanta bal aan dul istaagno qoraal ku soo baxay mid ka mid ah shabakadaha kooxdan oo ciwaankiisu ahaa CWXO oo dagaal xirfadaysan ku qaaday gudaha magaalada Jigjiga laguna shaaciyey warbaahinta afka Kooxda ku hadasha.
Qoralakaas waxaa lagu sheegay in habeenkii bishanu ahayd 5ta, dagaal culus oo jilbaha lagaga mudhxayi ku dhexmaray gudaha Jigjgiga ciidamo ka tirsan ‘’JWXO qaybta Gorgor’’ iyo ciidamada amniga.Warbixintu waxay intaas ku dartayin dagaalku bilowday fiidkii, shacabka magaaladuna habeenkii oo dhan xabadka dhulka ku hayeen iyagoo ka gabanayay hubka noocyadiisa kala duwan ee la is waydaarsanayay. Ugu danbayna ciidankii JWXO si iskood ah subaxii magaalada uga baxeen kadib markay khasaare laxaad leh u gaysteen kuwa Itoobiya.
Taariikhyahanadu waxay wariyeen in nin la oran jiray Ducaale-Qariis oo joogay dagmada Cayn ee gobalka Togdheer, si aadana ugasoo hor jeeday daraawiish iyo Sayid Maxamed habeen riyooday. Ducaale waxuu ku riyooday isagoo hooto ku ridaya kuna garaacaya xarunta Sayid Maxamed, isla markaana Sayidku fara caaradood kaga gabaday.
Markii waagu barayay ayaa Ducaale soo toosay isagoo meel cidla ah jiifa, waxuuna ogaaday inuu riyoonayay goobta uu joogana tahay Goldheer oo ah ceel Sanaag ku yaala, Sayidka uu riyada ku duqaynayayna ku sugan yahay Ayl oo aad uga fog. Haduu yaqiinsaday in waxuba riyo ahaa ayuu tix gabay ah tiriyay, waxaa ku jirtay tuduca soo socda:
Hadalkaa hadii Daraawiish loo geeyay waxay u qaateen aflagaado ka timid nin tabari ka noqotay inuu riyo maciinsado, rag badan ayaana ka gabyay, balse aynu soo qaadano tuducdan Sayidku arintaa ka yiri oo ah maxallu shaahidkayga (Hadalka aan aan qisadan usoo qaatay)
Hadaba iyadoo aan maanta waxa ka dhacaya Deegaankena la isaga sheekayn karin, maadaama oo telefoon iyo isgaadhsiini meel walba taalo, miyaan sheegashada kooxdan ee ah inay Jigjiga ka dhex dagaalameen la mid ahayn riyadii Ducaale-Qariis uu ku riyooday isagoo Sayidka duqaynaya?
Ruug-Cadaa igaga xeel dheer arimaha Garabka Asmara oo aanu maanta arintaa ku wada shactiraysanay ayaa yiri sidatan ‘’ ONLF (Garabka Asmara) waa ogyahiin in sheegashada noocan ahi ka gadmayn ani iyo adi iyo cid kasta oo gobalka kasoo jeeda, xaqiiqda ka jirtana og, balse waxaa jira dad aan xog ogaal ahayn oo kooxdani ku maasho dagaal ayaan gudaha ka wadnaa. Dadkaa qaarkood waxay kasoo jeedaan jamhuuriyada Soomaaliya, kuwa kale waa reer Waamo, qaar waa Sijuu, kuwa kale waa da’ yar aan dhulkiiba arag halka ay jiraan hooyooyin qaaraanka lagaga qaado Ogaadeenya marka la xoreeyo ayaa lacagta lagugusoo sawiri doonaa’’